ခရီးတစ်ခုကနေဘာလက်ဆောင်တွေယူလာလဲ? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ > ခရီးတစ်ခုကနေဘာလက်ဆောင်တွေယူလာလဲ?
ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား, ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
သင်သွားဖူးတဲ့ခရီးတိုင်းကိုမှတ်မိနိုင်သလား, သင်နှစ်သက်သောအမြင်များ, နှင့်သင်မြည်းစမ်းခဲ့သောအစားအစာများ? ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်, ထို့ကြောင့်အမှတ်တရများသည်ထိုအမှတ်တရများကိုတစ်သက်တာတည်မြဲစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ခရီးတစ်ခုကနေဘာလက်ဆောင်တွေယူလာလဲ? ဤတွင်နိဗ္ဗာန်ဘုံကိုအိမ်သို့ပြန်ယူရန်အကောင်းဆုံးအမှတ်တရလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ.
နံ့သာ, ငံပြာရည်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အရသာတွေကိုမင်းချက်ချင်းပြန်ယူလိမ့်မယ်, ရနံ့, ထိုအထူးနေရာ၏အခိုက်အတန့်များ. ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုကိုမှတ်မိကြောင်းသက်သေပြသည်, အစားအစာသည်နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, ချက်ပြုတ်နည်းများသည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုသူတို့နှင့်အတူရှိနေကြောင်းခံစားရစေလိမ့်မည်.
တရုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ခေါက်ဆွဲငံပြာရည်, ခေါက်ဆွဲများသည်တရုတ်ပြည်ခရီးမှပြန်လာရန်အံ့သြဖွယ်အမှတ်တရများပင်ဖြစ်သည်, သို့မဟုတ်အီတလီ, ဥပမာ. ဒါကြောင့်, အစားအသောက်ကြိုက်သူများအတွက်အပိုအိတ်တစ်လုံးထုပ်ရန်မမေ့ပါနှင့်, ဤအရသာလက်ဆောင်များကိုသီးခြားစီထုပ်ပိုးခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်. မင်းအဝတ်အစားတွေကအနီရောင် paprika အရိပ်တွေရှိနေတာကိုသိဖို့ခရီးဆောင်သေတ္တာကိုဖွင့်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး.
မီးရထားနှင့်အတူ Florence မှမီလန်
ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာရှင်များကိုပံ့ပိုးခြင်းသည်မင်းကစဉ်းစားဥာဏ်ကောင်းပြီးထက်မြက်တဲ့ခရီးသွားတစ်ယောက်ဆိုတာပြနေတယ်. လက်သုတ်ထားသောငံပြာရည်ပန်းကန်များ, ယက်စားပွဲအဝတ်, ဇာပန်းအင်္ကျီများ (သို့) ချယ်လှယ်ထားသောအင်္ကျီများသည်သင့်သူငယ်ချင်းများနှစ်သက်မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသောအမှတ်တရများဖြစ်သည်, အသုံး, မင်းကိုလက်ခံထားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုမင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု.
ပြည်တွင်းအနုပညာသည်ဥရောပနှင့်တရုတ်မည်သည့်ခရီးမှမဆိုပြန်ယူရန်လှပသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်. တရုတ်၌, မင်းကံကောင်းဖို့အနီရောင်မီးလုံးတွေရနိုင်တယ်, ရုရှားမှaလက်လုပ် Domovichok ဘီယာနှစ်သက်သော ဦး လေး (သို့) အစ်ကိုအတွက်ပရာ့ဂ်မှအအေးဘီယာဖန်ခွက်ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်. ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တဲ့စက်ဝိုင်းကြီးလဲ Eco-friendly ခရီးသွား, လက်ခံခြင်း, နှင့်အံ့သြဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်ပွားစေခဲ့သည်.
ဘာလင်တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Aachen ရန်
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Cologne မှ Frankfurt
Dresden တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Cologne မှ
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Cologne မှ Aachen
သင်၏ခရီးကိုသင်၏အိမ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေပါ, နယ်သာလန်နိုင်ငံမှလှပသောပန်း Delft ပန်းအိုး (သို့) သစ်သားဇမ္ဗူ. အိမ်အလှဆင်အမှတ်တရပစ္စည်းများသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပုံပြင်တွေပြောပြလိမ့်မယ်.
နံရံတွင်ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ရှိသည်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှ bohemian crystal, ဒါမှမဟုတ် cuckoo နာရီတွေကနေ Black ကသစ်တော သင်၏ဥရောပခရီးစဉ်မှအိမ်သို့ယူဆောင်လာရန်အလွန်ကောင်းသောအမှတ်တရများဖြစ်သည်.
ရထားနှင့် Florence သို့ Rimini
ရထားဖြင့် Florence မှ Rome သို့
မီးရထားဖြင့် Pisa မှ Florence သို့
ရထားဖြင့် Florence သို့ Venice
အရက်ကောင်းတစ်ခွက်နှင့်ခရီးမှပုံပြင်များဝေမျှခြင်းသည်အရည်ရွှမ်းသောအသေးစိတ်များအားလုံးကိုအမှတ်ရစေသည်, နှင့်ပျော်စရာအချိန်လေး. ဒေသထွက်အရက်များယူလာခြင်းသည်ဥရောပမှယူလာရန်လူကြိုက်များသောအမှတ်တရလက်ဆောင်ဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်၎င်းသည်တစ်ခုဖြစ်လျှင် အရက်သောက်သူအားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကြိုးစားသင့်သည်.
ဒါကြောင့်, အီတလီမှ Limoncello, သို့မဟုတ်ဂျာမနီနိုင်ငံ Rhein ချိုင့်မှ Riesling ဝိုင်, တစ်နည်းနည်းဖြင့်, လက်ခံသူများသည်ဤလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရန်စိတ်လှုပ်ရှားလိမ့်မည်. ဒေသခံသောက်တာဘာလဲဆိုတာသေချာမသိရင်, ညစာစားနေစဉ်ဒေသခံများ၏စားပွဲပေါ်မှမျက်မှန်များကိုအာရုံစိုက်ပါသို့မဟုတ်ဒေသခံဘား၌မေးပါ.
လက်ဝတ်ရတနာသည်သင်၏ခရီးများကိုနှလုံးသားနှင့်နီးကပ်စွာသယ်ဆောင်ရန်အံ့မခန်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. စွဲမက်ဖွယ်လည်ဆွဲတစ်ခု, ပိုလန်မှပယင်းနားကပ်, သို့မဟုတ်ချစ်စရာကောင်းသောငွေရောင်လက်ကောက်တစ်ခု, ဘယ်တော့မှပုံစံမကျတဲ့အပိုင်းအစတွေ, ဒါ့အပြင်, သူတို့သည်အချိန်တိုင်းဖြစ်သည်.
ဒါကြောင့်, သင်ကထူးခြားတဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေယူလာဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင်, ဒါဆိုရင်လက်ဝတ်ရတနာကစုံလင်တယ်. နိုင်ငံတိုင်းမှသင်၏လက်ကောက်သို့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုထည့်ခြင်းသည်လည်ပတ်ခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, တိုင်းတစ်ပါး၌လက်ဝတ်ရတနာ ၀ ယ်သောအခါ, ငွေသားကိုင်တွယ်ရာတွင်သတိထားပါ၊ မည်သည့်အရာမှမကျပါစေနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမည်ကြီးခရီးသွားလိမ်လည်မှုများ.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူသက်သေပြမှပဲရစ်
လိုင်ယွန်တစ် ဦး ရထားနှင့်အတူသက်သေပြရန်
သော့ချိတ်များနှင့်ပို့စကတ်များကိုမေ့လိုက်ပါ, မင်းသူငယ်ချင်းတွေကစုဆောင်းသူဖြစ်ရင်, ငါသူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုထဲကိုသူတို့ထည့်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အပိုင်းထက်ငါဂရုမစိုက်ဘူးလို့တော့မပြောပါဘူး. လူတိုင်းသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုစုဆောင်းသည်: ပရာ့ဂ်မှအလှဆင်ဘီယာမတ်ခွက်, Murano မှန်ပန်းပု, ရုရှား Babushka မှအရုပ်ရုပ်တုများ, ၎င်းတို့မှာဥပမာအချို့သာဖြစ်သည်.
ထို့အပွငျ, မျက်မှန်တပ်, ဦး ထုပ်များ, တံသင်များသည်ဥရောပသို့ခရီးတစ်ခုမှပြန်ယူလာရန်အခြားကြောက်စရာကောင်းသောအမှတ်တရလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်. နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားတယ်, ပါတီတွေမှာသုံးတယ်, ဒါမှမဟုတ်အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာသိမ်းထားတယ်, မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကမင်းအဲဒီအထူးအပိုင်းအစတစ်ခုနဲ့သူ့နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းကိုရှာနေတာကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူလန်ဒန်မှပဲရစ်
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူလန်ဒန်မှဘရပ်ဆဲလ်
Sweet Treats များ
ချိုမြိန်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆက်ဆံမှုများသည်အပြုံးတစ်ခုနှင့်နားထောင်သူ၏အာရုံကိုဖမ်းစားလိမ့်မည်. အစားအစာသည်နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ပုံပြင်များသို့ခရီးသွားသည့်အရသာအားလုံးမှတဆင့်. ဥပမာ, ပါရီယန် Macarons များသည်အရသာရှိသောအမှတ်တရပစ္စည်းများသာမဟုတ်ပါ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုမှာပြင်သစ်လက်ရာတွေရဲ့အနှစ်သာရနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖမ်းစားထားတုန်းပဲ, တောက်ပနှင့်လက်ရာမြောက်သောပုံစံ.
ဒါကြောင့်, အနည်းငယ်ကိုက်လိုက်လျှင်ဤအမှတ်တရပစ္စည်းပျောက်သွားသည်, အရသာနှင့်အံ့သြဖွယ်ခံစားမှုတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအမြဲရှိနေမည်. ဆွစ်ချောကလက်ကိုငါတို့ပထမဆုံးစစားခဲ့တုန်းကငါတို့ရဲ့အာရုံတွေကအမြဲမှတ်မိနေလိမ့်မယ်, သင်၏အရသာရှိသောအမှတ်တရလက်ဆောင်ကိုလက်ခံသူများသည်လည်းအမှတ်ရလိမ့်မည်. အကျဥ်းရုံးသည်, ချိုသောလက်ဆောင်များသည်ဥရောပခရီးမှပြန်လာရန်စိတ်ကူးယဉ်အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်သည်.
စျေး ၀ ယ်ခြင်းသည်နိုင်ငံခြားတွင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. မင်းရဲ့ပုံစံကိုမင်းပြောင်းနိုင်တယ်, ရုရှားမှရောင်စုံရိုးရာ scarf ကဲ့သို့သင်၏ဗီရိုထဲသို့အထူးပစ္စည်းထည့်ပါ, သားရေဂျာကင်အင်္ကျီ, နှင့်ပိုပြီး. မင်းသူငယ်ချင်းတွေကိုအဝတ်အစားတစ်ထည်ယူဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပုံစံနဲ့အရွယ်အစားကိုမင်းသိသင့်တယ်.
သို့သျောလညျး, ဥရောပမှာရွေးချယ်စရာအဝတ်အစားလက်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်, ၎င်းသည်အရွယ်အစားရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ. ဘာလင်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် စပျစ်သီးစျေးဝယ်, လန်ဒန်လမ်းမစျေးများမှအင်္ကျီများ, ပဲရစ်သို့မဟုတ်အီတလီမှအေးမြသောလည်စည်း, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှယူလာရန်အဝတ်အစားအမှတ်တရပစ္စည်းများအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်.
ဥရောပခရီးတစ်ခုမှယူဆောင်လာရန် Cliche အမှတ်တရပစ္စည်းများ
ဂန္ထဝင်အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်အတူသင်ဘယ်တော့မှမှားသွားနိုင်သည်. ဥပမာ, သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအား Eiffel Tower သော့ချိတ်လက်ဆောင်ပေးပါ, ရုရှားသစ်သား Matryoshka, သို့မဟုတ်အမ်စတာဒမ်မှသစ်သားခုံများ, ဤအရာသည်ချစ်စရာကောင်းပြီးစဉ်းစားစရာကောင်းသောအမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်. ထို့အပြင်, လေဆိပ်၌ဤဂန္ထဝင်ဥရောပအမှတ်တရပစ္စည်းများကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ် ဘူတာရုံ, နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ. သို့သျောလညျး, ထိုအမှတ်တရများကိုထည့်စဉ်းစားပါ’ ရထားဘူတာရုံစျေးထက်အများကြီးပိုလိမ့်မည်, မြို့ထဲမှာထက်.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူဗင်းနစ်မှ Bologna
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့သည်မမေ့နိုင်သောဥရောပ၌ခရီးတစ်ခုစီစဉ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်. သင်သည်ဥရောပရှိမည်သည့်နေရာသို့မဆိုရထားဖြင့်လွယ်ကူစွာခရီးသွားနိုင်သည်, စျေး ၀ ယ ်၍ ခရီးသွားရလွယ်ကူပြီးရတနာများနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများပြည့်နေသောခရီးဆောင်အိတ်များပါလိမ့်မည်.
ငါတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ခရီးတစ်ခုမှယူလာရန်အမှတ်တရများကဘာလဲ?သင်၏ site ပေါ်သို့? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, သင်သည် / es သို့ / fr သို့ / / de နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုပြောင်းနိုင်သည်.
Bestsouvenirideas Bestsouvenirsfromeurope giftsfromeurope Souvenirs
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး Escape အခန်းများ
10 ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရာသီခရီးသွားနေရာများ